ဇော်အောင်(မုံရွာ) - တစ်ရှုးငှက်ပျော ဇတ်လမ်း - MoeMaKa Media
Home / Community / Experience / Kachin / Zaw Aung (Mon Ywa) / ဇော်အောင်(မုံရွာ) - တစ်ရှုးငှက်ပျော ဇတ်လမ်း
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - တစ်ရှုးငှက်ပျော ဇတ်လမ်း
Community, Experience, Kachin, Zaw Aung (Mon Ywa)
(မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၂၀
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရင် တရုပ်ကုမဏီတွေ၊ ဂျပန်ကုမဏီတွေနဲ့ လုပ်ငန်များစွာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်က တစ်ရှုးငှက်ပျော စိုက်ပျိုးဧက ၄သောင်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တန်ဖိုးတွက်ကြည့်ရင် နိုင်ငံတကာ (ငှက်ပျော export) များမှာ တဧက ကို တနှစ်ဝင်ငွေ မြေကောင်း၊ နည်းပညာကောင်းရင် us$ 6000 ပျှမ်းမျှ ရရှိပါတယ်။ မြေညံရင် စျေးမရပါဘူး။ us$1600 per year ပဲ ရတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ဟက်တာ ကို 1 hacter=2.4 Acre နဲ့ ပြောင်းတွက်ချက်တာပါ။ တစ်ဧက us $8000 အထိ ရနိုင်တယ် လို့ 2012 စာတန်းမှာ ရေးထားပါတယ်။ ...ဒီတော့ ဧက ၄သောင်း ကို တွက်ကြည့်ရင် us $8000 x 40,000= us$320 million (အများဆုံး) စျေးကွက် ရှိပါတယ်။ 50% လျှော့တွက်ရင် တနှစ် us$ 160 million ($1m=သိန်း၁၅၀,၀၀၀) ဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ် က 2019 မြစ်ကြီးနားဂျာနယ် သတင်းထောက်ကို ငှက်ပျောကုမဏီ သူဌေးနဲ့အဖွဲ့က အနိုင်ကျင့်ရာက တစ်ရှုးငှက်ပျော ပြသနာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး သိရတယ်။ KIA ကလည်း သူ့နယ်မြေတွေမှာ စိုက်ခွင့်မပေးတော့ဘူး ကြေငြာတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးစေတယ်။ လုပ်သားတွေ ဓာတုဆေးတွေကြောင်း မြစ်ချောင်း ပျက်စီး တိရိစာန်သားငါးသေကြေကြတယ်။ ရပ်ဆိုင်းတော့မယ်လို ဖြစ်နေပေမဲ့ Feb-2020 အထိ ရှယ်နေတုန်းပဲ။ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကလည်း တပ်မတော်. ကေအိုအေ. ကေဒီအေ စတဲ့ လက်နက်ကိုင်များကို ဘာမှ ပြောမရဘူး.. ။
အဆိုးဆုံးကတော့ ငှက်ပျောသီးစက္ကူသေတ္တာ တွေကို ဖိလစ်ပို၊ အက်ကွေဒေါ စသဖြင့် တံဆိပ်တွေ မြန်မာပြည်မှာ နှိပ်ပြီး မိအေး၂ခါ နာ နေ တယ် လို့ ရေး ထား တယ်။ တပ်မတော် ကို သူတို့သတင်းစာရှင်းပွဲမှာ သွား မေးရင်လဲ ဒီလောက်များတဲ့ ကားတွေ ဘယ်ဂိတ်ကနေ တရုပ်ပြည် ထဲ ဝင်သွားသလဲ သိမှာမဟုတ်။ ကျောက်စိမ်း ကားတွေ၊ ရှားပါးသတ္တု ကားတွေလည်း ကချင်ပြည်နယ်ကနေ တရုပ်ပြည်ကို သယ်နေကြတာပဲ။
ဧက ၄သောင်းကျော် စိုက်ပျိုးနေတယ်လို့ ရေးထားပေမဲ့ အချက်လက်ရဖို့ (ကျောက်စိမ်းနဲ့ပယင်းလို) မလွယ်လှပါ။
...တရုပ်သံရုံးကို သက်သေများ. ဓာတ်ပုံ.. ဂူဂယ်မက် ကားလမ်းမြေပုံ များနဲ့ အရေးယူပေးဖို့ စာပို့ရပါမယ်။
...မြန်မာ ကာချုပ်ကို တစ်စောင်
...လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (ကချင်ပြည်နယ်က ဦးတင်စိုး. ဖားကန့်) ကို သွားတွေ့ပြီး တစ်စောင်ပေးရပါမယ်။
မလွယ်လှပါ။ ကျောက်စိမ်း၊ ပယင်းတွေတောင် အခွန်မရတာ၊ ငှက်ပျော စိုက် တာ ထိန်းဖို့ အလွန်မလွယ်လှပါ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေ နဲ့ အလုပ်သမားတွေ အဆင်ပြေညီညွတ်နေသရွေ၊့အစိုးရဥပဒေ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။ နယ်မြေ မငြိမ်းချမ်းတော့ ထိန်းဖို့ ပိုခက်ပါတယ်။
ဂလိုဘယ် Global Witness ဝင်ရေးရအောင်လဲ ငှက်ပျောရဲ့ တန်ဖိုးက နည်းနည်းလေးပါ။
ဖိလစ်ပိုင်က တနှစ် us$2000 million ငှက်ပျောသီး ဝင်ငွေရတယ်။ ၂၀၁၈ မှာ တန်ချိန် ၄.၃၈ သန်း တင်ပို့ တယ် တဲ့။ တစ်တန်ကို $200 ရောင်းကြတယ်။ .. Covid19 ကြောင့် စျေးအဆမတန် ကျဆင်းလို့ အကြီးကျယ်ထိခိုက်နေတယ်...တဲ့။ ဒါတောင် တရုပ်က စျေးကောင်းပေး ဝယ်နေတုန်းပဲ ဆိုပဲ။
According to the FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) the area harvested in 2012 was approximately five million hectares, and production was roughly 102 million tons.
Bananas remain among the highest-demand fruits in China, surpassed only by apples and citrus. According to preliminary reports from the Philippine Statistics Authority, last year’s banana export volume reachedarecord-breaking 4.38 million tons withavalue of almost $2 billion. Furthermore, banana exports to China rose by 37% to reach 1.67 million tons. In 2018, China surpassed Japan as the biggest importer of Philippine bananas.
Myanmar (Kachin) banana
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - တစ်ရှုးငှက်ပျော ဇတ်လမ်း Reviewed by MoeMaKa on 6:29 AM Rating: 5
Zaw Aung (Mon Ywa)